Ifowuni ye-Mapper 10, ukucinga okokuqala - ii-Geofumadas
NgoJuni, 2011 cadastre, Okufumaneka, GPS / Izixhobo, ezintsha, Ukuprinta kokuqala
Emva koko ukuthenga I-ashteki ngo-Trimble, i-Spectra iqalile ukukhuthaza imikhiqizo ye-Mobile Mapper. Eyona nto elula kunaleyo yiMephu ye-Mapper 10, endifuna ukuyibona ngeli xesha.
I-Mobile Mapper Pro, iingu-CE nee-CX ziqulunqiwe apho nangona okokugqibela kusemakethe; kwi-teknoloji yeBlade eyaziwayo yakhishwa Imephu yeMapper 6, okhokho wale nto esiyiyo ngoku. Umgca uhlukile, kuba i-MM6 nangona iteknoloji entsha ngokwemigaqo yenkqubo yokusebenza, ayidluli kwi-Mobile Mapper Pro ngokwemiqathango yokumkela, eyona yamukeli ococekileyo ngokukwazi ukufunda ikhowudi yeC / A kunye nesigaba sokuphatha. Yilethe i-postproceso kunye neendleko zayo zokugqibela kunye neendleko ezihamba phambili ezihamba ngeedola ze-1,200 nge-postproceso. Ngethuba i-MM10 ifunda kuphela ikhowudi yeC / A kunye ne teknoloji (inqanaba lesoftware, ukungenwa kwamkela) liyakwazi ukufikelela kwi-cms ye-post-processing cms ye-50; xa nje usebenze emva kokusebenza, kodwa olu khetho libiza i-500 eyongezelelweyo idola, oko kukuthi, kuza kuwe njenge-1,900.
Indlela iMephu yePhepha ye-10 eyahlukileyo ngayo kwi-Mobile Mapper 6
Ngokubanzi, ukwahlukana kubalulekile. Ngokwendlela yoyilo, i-MM10 yinde, inkulu, kodwa iyancipha; ngokusasazwa kancinane kwendawo; Asizange sisazi ukuba kutheni i-roasting phezulu. Ekupheleni kwayo ine-protuberances ye-raber eyenza kube lula ukuphatha ngesandla esisodwa.
Ibhokisi elingezantsi libonisa ngokuluhlaza imimandla eyenza i-Mobile Mapper 10 inamandla amakhulu malunga ne-MM6 kunye nalabo abhalwe ngokubomvu kukungabikho okungafaniyo okungenakukuphepha ekubhekeleni kwenguqu. Ndibeka kwakhona ikholam ukubonisa ukuba kwenzeka ntoni na Imephu yeMapper 100, endithe ndathetha ngaphambili.
Imephu yeMapper 6 Imephu yeMapper 10 Imephu yeMapper 100
I nkqantosi GPS, SBAS IGPS GPS, GLONASS, SBAS
Iziteshi 12 20 45
Ukuphindaphinda L1 L1 L1, L2
Uhlaziyo 1 Hz 1 Hz Imizuzwana ye0.05
Ifomathi yedatha NMEA NMEA I-RTCM i-3.1, i-ATOM, i-CMR (+), NMEA
Inokusebenza njengesiseko hayi hayi Si
Ukuchaneka ngexesha langempela le-SBAS 1 - 2 mts. 1 - 2 mts. ngaphantsi kwe-50 cm .. kwi-SBAS, ngaphantsi kwe-30 cm. kwiDGPS.
Ukuchaneka kokuthunyelwa kweposi ngaphantsi komitha omnye ngaphantsi kwama-50 centimeters 1 cm.
Inkqubo 400 Mhz 600 Mhz 806 MHz
Inkqubo yokusebenza Windows Mobile 6.1 Windows Mobile 6.5 Windows Mobile 6.5
NoNxibelelwano I-Bluetooth, i-USB I-Bluetooth, i-USB GSM / GPRS, iWifi GSM / GPRS, BT, WLAN
Tamaño X x 14.6 6.4 2.9 cm 16.9 x 8.8 2.5 cm X x 19 9 4.33 cm
U bunzima I-224 gram I-380 gram ngebhetri I-648 gram
Isikrini 2.7 « 3.5 « 3.5 «
Memoria 64MB SDRAM, 128 MB Flash, imemori ye-SD I-128 MB SDRAM, i-256 MB NAND, iMemori ye-SDHC yeMetro ukuya kwi-8GB 256 MB SDRAM / 2 GB NAND, Micro SDHC
Ubushushu obuphantsi -20 C -10 C -20 C
Ubushushu obukhulu + 60 C + 60 C + 60 C
Yehlisa inkxaso kunye neentshukumo 1 metro Iimitha ze-1.20 kwikhonkrithi Iimitha ze-1.20 kwikhonkrithi, ngaphezulu I-ETS300 019 & MIL-STD-810
Ibhetri Elinye ibini AA I-lithium / ubude ukuya kwiiyure ze-20 I-lithium / ubude ukuya kwiiyure ze-8
Uhlobo lwe-antenna Ngaphakathi / ngaphandle Ngaphakathi / ngaphandle Ngaphakathi / ngaphandle
Ukuphucula okukhulu kubhetri, endaweni yesibini yeAA izisa ibhetri yeLithium ngokuzimela ukuya kwiiyure ze-20; akukho nto embi kuba iinyanga ezintathu zomsebenzi kwiiyure ze-7. Oku kuye kwamnceda ukuba athathwe.
Ayiphuculanga ngokuchanekileyo ngaphandle kokucwangciswa kweposi, kuba ngumqhubi wendlela ochazwe ngamaritha angaphantsi kwe-2 metres. Kufuneka ukuba uqonde ukuba liqela lentsholongwane elilodwa, alixhasi i-RTK. Kodwa iyaphucula ngokumalunga ne-MM6 ngokuchanekileyo kwedatha emva kokucubungula, okungekho ngaphantsi kwe-cm 50, elingana ne-pixel ye-orthophoto eqhelekileyo kwiphononongo yasemaphandleni.
Le ngqiqo icingelwa ngokuba inomlinganiselo wezithuba ze-20 (i-GPS L1 C / A kunye nemo ye-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS). Ukongezwa kuqondwa ukuba iyakwazi ukuthunyelwa emva kokubhekiselele kwisiseko esikude ngeGPRS okanye iWifi.
Izisa inguqulelo entsha yeWindows Mobile, iprojekthi iphuculwe (yi-ARM9) kodwa kwinqanaba lesoftware lizisa into efanayo: Windows Mobile. Ukuvumelanisa okusebenzayo kunye ne-Internet Explorer. Ifowuni yeMephu yeMapsi ifakiwe, efana ne-Mapping Mapping ngezinye uphuculo; Nangona kunjalo, ixhasa iArpPad nangona le layisenisi ingathengwa kuphela eUnited States.
Kwakhona imemori inamandla amakhulu, ikhupha i-256 MB NAND (i-Flash non-volatile), ngoku ixhasa i-MicroSD ukuya kwi-8 GB.
Njengoko uyongezelela ungathenga i-antenna yangaphandle kunye ne-racket ukuyixhoma kwinqanawa. Ukuze usebenze ukhetho lokuthunyelwa kwangemva, kufuneka uhlawulwe ikhi yokuqalisa.
Ngexabiso layo, ukwehla kwe-US $ 1,500 ayibukeka kakubi. Nangona ngombono wam nje yiPokhethi ene-GPS kunye ne-GIS.
Kubonakala kulungelelaniso kwi-cadastre yasemaphandleni, amahlathi, iiprojekthi zendalo okanye apho i-50 centimeters yokuchaneka kwanele. Kuyacaca ukuba kufuneka sizisebenzise i-GIS, kuba ikuvumela ukuba uphakamise izalathisi, iipolgoni okanye amanqaku ngokubaluleka kweempawu esizikhangayo, kubandakanywa iifoto kunye nesandi.
Sifanele sibone oko kwenzekayo xa sisebenzisa i-gvSIG Mobile ukufumana into engaphezulu kweSelula yeMephu yeMephu.
Yintoni eyenza ihluke kwi-Mobile Mapper 100
Kakade, i-Mobile Mapper 10 iyidonti xa ixhamla kunye Imephu yeMapper 100. Le yinye inqanaba lesicatshulwa kunye neenkcukacha zokuthunyelwa kweposi emva kwe-1 cm, nangona kusekho ukuvama.
Mhlawumbi inkulu kakhulu i-MM10 yinto yokuba ayinakwenzeka, ifinyelela apho ngenjongo eyenzelwe yona.
Ngakolunye uhlangothi, i-Mobile Mapper 100 inokwenziwa. Nge-antenna yangaphandle kunye nokuqulunqwa kwezinto ezinokuba yi-Promark 100, kunye nento engakumbi kwi-Promark 200 eye isekela imvama ephindwe kabini.
Nangona ngaphandle kwezindlu kuyafana.
Siza kubona ukuba ukuthelekiswa kwenye indawo.
Apha unokufumana ummeli wale mveliso.
Apha unokufumana iimveliso ezininzi ze-Ashtech.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ngaphesheya kwePad
Post Next Njengoko kumisa online shopOkulandelayo "
Iimpendulo ze-18 "kwi-Map Map 10, ukuqala kokuqala"
Ndicinga ukuba kufuneka uhlolisise nomsasazo wendawo.
URoberto Gv uthi:
Ndifuna ukuba undincede ndibe ne-GPS MOBILLE MAPPER 10, kwaye ndifuna ukuthenga i-antenna yangaphandle, umbuzo wam uhlobo luni lwe-antenna ukuyithenga kwaye luhlobo luni lokufikelela kuyo ukuze lusebenze kakuhle
I-USA Google Shopping ukuba nombono wexabiso lentengo
ngokukhawuleza ukuba eli lixabiso elisemthethweni leemephu ze-100
Miguel Moreno uthi:
Ucinga ntoni ngale nqaku? http://www.abreco.com.mx/gps/postproceso.htm
NdineMephu ye-Mobile 10 kunye nenkqubo yokuthumela, yintoni into endikwazi ukuyifumana njengesikhululo esisezantsi kunye nento enokuyilindela?
Isofthiwe ye-MM 10 Ngaba ingafakwa kwiikhompyuter enye?
Oko kuxhomekeka kwilizwe okulo. Eyona nto inokusebenziseka kakhulu kukusasazwa kweTopcon / Magellan yasekhaya
KUNYE OKUYA KUXHUMANA: NGOKUBA NGINGENZA I-ACCESSORIES FOR MM6, NGOKWENZA NGOKUQHUBEKA KWENKQUBO YOKUGCINA IMIYALELO YOKUSEBENZISA IT AT 100%.
Andiyi kucinga kuwe UKUBA UNGAKHULU KUNYE, UKUKHINDA NGEZINDABA NJENGOBA KUNYE.
Sawubona, enhle kakhulu
Bendikhangela kwiwebhusayithi yeGeofumadas kodwa andifumananga kwanto endandiyifuna, ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndikubuze ngokuthe ngqo: ngaba unaso isikhokelo / isikhokelo okanye uyazi nayiphi na indawo endinokukhuphela kuyo ukuba ungasebenza njani endle kunye neqela « i-ashtech mobilemapper 10 ». Ndiyazi ukuba umbuzo ubanzi kakhulu, kodwa nantoni na onokuthi uphawule ngayo, ndiyabulela. Ngaba incwadi yomsebenzisi yenguqulo ye-100 ingasebenza kwi-10? Yeyona kuphela endiyibonileyo kwiwebhusayithi yakho. Ndityelele iwebhusayithi ye-Ashtch kwaye andibonanga lukhulu. Ndinayo kuphela incwadi yencwadana yeofisi.
Ndine-maper 10 kodwa andikwazi ukufumana indlela yokumisela inkqubo ye-nat 27 enemigca ye-nat 27 kuphela ubude kunye nobude obonakalayo kwaye ndifuna i "x" kunye "Y" ne "Z"
Kumele usebenzise i-Mobile Mapper Office, ongayilanda kwiphepha le-ASHTECH.
Akufanele ukudibanisa i-Mobile Mapping yesoftware eyenza elo qela, kunye ne-Mobile Mapper Software software.
Ndiqeshise i-Mobile Mapper 6. Ngaba umntu uyazi ukuba iifom mmmm (iindlela zokuhamba) ziguqulwa kwezinye iifom ze-GIS? Akundikhethi inketho nge-Mobile Mapper Office
wilder alvarez cisneros uthi:
Ndinemibuzo ye-35 ye-Mexican kwaye ukuba ndifuna ukuchaneka, ndenza umsebenzi wokucwangcisa edolophini ... ebonisa ukuba kuthengwa nale mali ... nceda undithumele i-quote
Ngoku into icatshulwa i-Trimble, ukuba ndibe nebhajethi yeedola ze-1500, ndingathini na ukuba ndincome i-Mobile Mapper okanye i-Trimble Juno? Ukuchaneka, ukunyaniseka, ukuhamba, i-gis, induduzo, njl.
UJuno ulunge kakhulu. Ngokuhlehlisa ukuchaneka kujikeleze indlela ehambahamba ngaphandle, ngaphandle kokuhlehlisa kuba ngumqhubi wenqanawa ngokuchaneka ngaphezulu kwe2.50
Kuthiwani nge-Trimble Juno SB yomsebenzi wentsimi? Andifuni ukuchaneka kwentimitha